युगसम्बाद साप्ताहिक - कैलालीमा सुरक्षाकर्मीहरुकै विभत्स हत्या : देशको परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर
Saturday, 10.19.2019, 12:14am (GMT+5.5) Home Contact
कैलालीमा सुरक्षाकर्मीहरुकै विभत्स हत्या : देशको परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर
Wednesday, 08.26.2015, 03:49pm (GMT+5.5)
कैलाली । देशको परिस्थिति विस्फोटक बन्दै नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । बन्दका शृङ्खलाहरू चलिरहेका छन् । थरुहट प्रदेशको माग गर्दै दुई हप्तादेखि चलिरहेको कैलालीको आन्दोलन सोमबार अकल्पनीय रुपमा हिंसात्मक बन्न पुग्यो । घरेलु हतियारसहित निषेधाज्ञा तोड्न उत्रेका १० हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीको बेग प्रहरीले थेग्न नसक्दा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षकसहितको मृत्यु भएको हो । आक्रमणकारीहरुले घेरा हालेर एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्सपेक्टर बलराम विष्ट, केशव बोहोरा र एसएसपीका सुरक्षा गार्ड तथा लोकेन्द्र चन्द, हवल्दार राम विहाही चौधरी र ललित साउदको हत्या गरेका थिए कैलालीको यो घटना इतिहासकै सर्वाधिक दुर्दान्त बन्न पुगेको छ । यो हिंसाको परिणाम के आउने हो ? यसै भन्न सकिन्न । राजनीतिक दलका नेताहरुले अब कुन बाटो लिने हुन् पत्तो छैन । यो घटनाले चार दलका शीर्ष नेताहरूले छ प्रदेशको खाका बाहिर ल्याएपछि देशमा उत्पन्न भएको बिष्फोटक परिस्थिति साम्य हुनेतिरभन्दा भनझन् विस्तारित हुँदैगएको छ ।
बिरोधहरुको सामना गर्न नसकेर छ प्रदेशको खाका सात प्रदेशमा बदलियो । कर्णाली र मध्यपश्चिमको आन्दोलन चार जनाको ज्यान गएपछिमात्र सम्बोधित हुनपुग्यो । थरुहट र मधेशको आन्दोलन दुई हप्तादेखि चलेको चलेकै छ । सप्तरी र भैरहवामा एक एक जनाको ज्यान गुमिसकेको छ । मधेश र थरुहटबाट पहाडिया धपाउने र मधेशलाई अर्कै देश बनाउनेसम्मका षड्यन्त्रकारी योजनाहरू उजागर भैरहेका छन् । आदिवासी थारूहरू र भूमिपुत्र तराईवासीहरूले राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी र सामाजिक–साम्प्रदायिक सद्भाव खल्वल्याउन चाहने उद्दण्ड, अराजकतावादी र राष्ट्रघातीहरूको पहिचान गरेर बहकाउमा नलाग्न सजगता अपनाएका छन् तापनि सरकारको उदासिनताको लाभ उठाउने धम्कीपूर्ण प्रयासमा विग्रहकारीहरू लागिरहेका छन् । चार दलको सिण्डिकेट पनि टुटेर तीन दलको बनेको छ भने ती तीन दलभित्रका नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीभित्र मच्चिइरहेको बबण्डरले संविधान निर्माण प्रक्रिया नटुंगिदै के कस्तो स्थिति सिर्जना गर्ने हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । आठ प्रदेशको नयाँ खाकाका लागि पनि तीन दलभित्रै कसरत चलिरहेको छ । संघीयतारुपी आगोको ज्वालाले मुलुकलाई कतिसम्म डढाउने हो भन्ने चिन्ताग्रस्त स्थिति पैदा भएको छ ।
संविधानसभामा संविधानको विधेयक पेश भएको छ । संविधानसभाभित्र नारावाजी र बहिष्कारको नयाँ शृङ्खला सुरु भएको छ । सद्भावना पार्टीका चार सभासद्ले राष्ट्रपतिको आग्रहसमेतलाई बेवास्ता गरी संविधानसभाबाट राजीनामा दिएका छन् । सुझाव संकलनको क्रममा ९० प्रतिशत सुझावदाताले धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध राय सुझाव दिएका भए पनि संविधानको विधेयकमा त्यसको कुनै प्रतिबिम्बन छैन । सदनमा राप्रपा नेपालको नारावाजी र संघीय समाजवादी फोरम र केही मधेशवादी दलको बहिष्कारबीच विधेयक पेश भएको छ । सदन र सडक दुवैतिर देखिँदै गएको बिष्फोटक स्थितिले मुलुक संकटको नयाँ दिशातिर घचेटिएको र अवाञ्छित द्वन्द्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको प्रष्टै देखिएको छ ।
हिजो र अस्ति आदिवासी जनजाति महासंघले देशव्यापी बन्दको आव्हान गर्याे । सधैं बन्द बन्दले आजित भएका जनताले स्वतस्फूर्त रुपमा बन्दको अवज्ञा गरे । देशका अन्य भागमा पनि जनता आँफै बन्दको प्रतिकारमा उत्रिनथालेका छन् । सडकमा प्रहरी उतार्नु र केही बन्दकर्तालाई धरपकड गर्नु बाहेक सरकारले नागरिक सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति दिनसकेको छैन । बिभिन्न जिल्लामा कतै कर्फ्यू लगाउने र कतै निषेधाज्ञा जारी गरेर राज्यशक्ति प्रयोग गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिने असफल प्रयास भैरहेको छ भने राजनीतिक संवाद प्रक्रियाबाट समस्याको निदान खोज्ने कुनै पहल सरकारले गरेको छैन । नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, बिराटनगर लगायतको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू निरन्तरको बन्दको मारमा परेका छन् । हजारौं मजदुरहरूको गास खोसिएको छ । राजधानी लगायतका देशका बिभिन्न भागमा लाखौंलाख विद्यार्थीको पढाइमा अवरोध खडा भएको छ । कृषि उत्पादन बजारमा पुग्न पाएको छैन । दैनिक अर्बाैंअर्बको नोक्सानी देशले बेहोरिइरहेको छ । यी सवै यो देशलाई असफल पार्न प्रायोजन गरिएको राजनीतिक बितण्डाकै उपज हो भन्ने निष्कर्ष निकालन कुनै गाह्रो छैन । सरकार चलाउने र प्रमुख दलहरूको पगरी गुथेका नेताहरूले यो विदिर्ण अवस्थालाई देखेकोनदेखेझैं गरिरहेका छन् । संविधान नबन्दै त देशको हालत यस्तो बनेको छ भने यथास्थितिको संविधान जारी भएपछि मुलुकले कति भुक्तमान सहनुपर्ने हो पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ ।
तराईका बिभिन्न जिल्लामा चर्किएको द्वन्द्वले त्यहाँको जनजीवन ठप्प भएको छ । मधेशी, जनजाति, थारुहट लगायतका आन्दोलनलाई हिंसात्मक रुप दिन सुनियोजित षड्यन्त्र भैरहेको आभास अमरेश सिंह, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले कैलालीको टीकापुरमै गएर दिएका थिए । भैरहवालगायतका कतिपय जिल्लामा सामाजिक सद्भावविरुद्धका गतिविधिको प्रायोजन भैसकेको छ । नवलपरासीमा आन्दोलनलाई सघाउन भारतबाट बसमा ओसारिएकाहरूले राष्ट्रिय झण्डासमेत जलाएको खवरले षड्यन्त्रको एउटा पाटो उघारेको छ । भूमिपुत्र तराईवासीले राष्ट्रिय सद्भाव विरुद्धको आन्दोलनलाई साथ नदिने भएपछि खुला सीमापारबाट भाडाका टट्टु ओसारी बित्तण्डा मच्चाउने हर्कत सुरुभएको छ । यसले मुलुकको भावी संकटको यथेष्ठ संकेत गरेको विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
सात प्रदेश : थोरै मात्र खुसी भए (08.26.2015)
राजनीतिमा अपराध घुसेपछि (08.26.2015)
चौतर्फी विरोधको सामना गर्न कठीन : दुई हप्ताभित्रै संविधान आउने पक्कापक्की (08.11.2015)
धर्ममा नेताहरूको रहस्यमय मौनता (08.11.2015)
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ देवकोटाको निधन (08.11.2015)
चार दलका कुरा मिल्यो, अरु आक्रोशित (08.11.2015)
संविधान निर्माणमा वैदेशिक शक्तिहरूको अड्चन (08.04.2015)
६० वर्ष पुग्यो नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको (08.04.2015)
के सम्भव छ शैक्षिक योग्यता तोक्न (08.04.2015)
नेपाल मेटाउने षड्यन्त्रको गन्ध (07.28.2015)
संविधान निर्माणका धेरै तगारा पारहुन बाँकी (07.28.2015)
नेताहरूको अहंकार टुट्यो (07.28.2015)
प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था : युवाहरूलाई मौका (07.28.2015)
संविधान लेखनमा दिल्लीको प्रभाव ! (07.21.2015)
सम्झौताको भारी कि संविधान ? (07.21.2015)
युगसम्वाद ‘क’ श्रेणीमा (07.21.2015)
नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई सुझाव हस्तान्तरण (07.21.2015)
बजेटसंगै नेताहरूको भारतयात्रा सुरु (07.14.2015)
सीमा सुरक्षामा सरकारको ध्यान खै ? (07.14.2015)
चिन्ता पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणमा (07.14.2015)